Na-ebute Omnichannel maka Black Friday na Cyber ​​Monday | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 7, 2017 Ọ bụ Jessica Hawthorne-Castro
E nweghị ajụjụ banyere ya, retail na-enwe a ike mgbanwe. Xgba ọsọ mgbe niile n’etiti ọwa niile na-eme ka ndị na-ere ahịa ka ha mee ka ahịa na ahịa ha dị elu, ọkachasị ka ha na-abịaru Black Friday na Cyber ​​Monday.
Dijitalụ ahịa, nke gụnyere ntanetị na ekwentị mkpanaaka, bụ n'ụzọ doro anya na-enwu gbaa na mkpọsa. Cyber ​​Monday 2016 kwuru na aha maka kasị ukwuu online ụbọchị ahịa na US akụkọ ihe mere eme, na $ 3.39 ijeri na online ahịa. Black Friday bịara na ezigbo nso nke abụọ $ 3.34 ijeri na online ahịa, na-akwọ ndekọ $ 1.2 ijeri na mobile ego. Ihe ịrịba ama niile na-arụtụ aka ịre ahịa dijitalụ ka mma n'oge oge ezumike nke afọ a.
Ọ bụ ezie na ire ahịa ahịa na-arịwanye elu, a na-agwakọta ozi ahụ maka ire ahịa brik na-ngwa agha. Dabere na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa Fung Global Retail na Teknụzụ, ihe karịrị 5,700 ụlọ ahịa na-emechi ka a mara ọkwa site na September 1, 2017. Nke ahụ bụ mmụba 181% karịa 2016. Ma Akụkọ nyocha nke IHL atụmatụ na ndị na-ere ahịa ga-emeghe 4,080 karịa ụlọ ahịa na 2017 karịa ka ha na-emechi ma na-eme atụmatụ imeghe karịa 5,500 ọzọ na 2018.
Ya mere, gịnị ka ndị na-ere ahịa kwesịrị ime ka ha na-abanye n’afọ ezumike a? Kedụ ka ha kwesiri isi na-akụ ahịa na azụmaahịa iji hụ na ha kụrụ aka nri niile? Bido site na nsuso na nyochaa data ndị ahịa wee dozie ya, na-etinye nlebara anya pụrụ iche na usoro omnichannel nke na-anaghị achụrụ ọwa ọ bụla ma ọ bụ ndị ahịa ọ bụla àjà. Ikwu okwu banyere onye ahia gi, tinye oge na ike ya na idozi onwe gi ka ichoro igba ahia ahia gi.
Ihe niile banyere Omnichannel
Iji kpughari mgbanwe ndị a na ihe ndị a na-emegiderịta onwe ha, ndị na-ere ahịa na-enyefe ọrụ ọhụụ, teknụzụ na mbọ ahịa azụmaahịa iji kwado omnichan, ụzọ dị iche iche dị iche iche na-emebi ahịrị dị n'etiti ụlọ ahịa, n'ịntanetị, ekwentị mkpanaaka na ọbụna katalọgụ n'ime ahụmịhe na-arụkọ ọrụ ọnụ. Nke ahụ bụ n'ihi na ebe a na-ere ahịa omnichannel bụ ebe ego dị. Dị ka a akụkọ si eMarketer, 59% nke ndị na-ere ahịa kwuru na ndị ahịa omnichannel bara uru karịa na 2016 karịa ndị ahịa otu ọwa, vs. 48% na 2015.
N'oge na-adịbeghị anya Amazon gbasaa akara ụkwụ omnishannel site na ịmalite uwe ya, nke zuru ezu Prime Wardrobe nke na-eme ka ndị ọrụ nwalee tupu ha azụta. O nwetakwara Whole Foods ma mepee ọnụ ọgụgụ ole na ole nke ụlọ ahịa na-ere ahịa Amazon. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ na-enyocha ụlọ nkwakọba ihe n'ime obodo ndị mepere emepe gburugburu mba ahụ ka ọ nwee ike ịnyefe otu ụbọchị nye ndị ahịa zụrụ site na ntanetị na ekwentị mkpanaaka.
Ihe na-ere ahịa nke Amazon Prime Day ahịa emeela nke ọma. N'afọ a, Amazon Prime Day dị ka ụbọchị kachasị ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, na-eto 60% na 2016 na karie Amazon nke 2016 Black Friday na Cyber ​​Monday ahịa. Na Amazon na-arụ nnukwu ọrụ na-elekwasị anya n'ihe ndị a ma ama, na-atụle ọtụtụ ihe ndị erere na Prime Day bụ ngwaahịa ndị ama ama nke Amazon. Chọrọ ihe akaebe ọzọ? Dabere na nyocha site na iberibe ọgụgụ isi, 43% nke ire ere ahịa n'ịntanetị niile na United States gafere Amazon na 2016. Site na mmụba ngwaahịa ọhụrụ ndị a, Amazon na-achọ ị nweta mpempe akwụkwọ buru ibu karị, ikekwe ruo 50% òkè ahịa na 2021, dị ka ụlọ ọrụ Wall Street firm Needham si kwuo.
Ka ọ dị ugbu a Walmart, nwere ihe karịrị ụlọ ahịa 5,000, na-ewulite ọnụnọ ya n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ntakịrị n'azụ Amazon na mgbasawanye nke omnichannel, ịzụta nke Jet.com na-ere ahịa n'oge na-adịbeghị anya, yana nnweta nke obere ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị ModCloth, Bonobos na Moosejaw, emeela ka isi ahịa ahịa n'ịntanetị. Iji gaa n'ihu na asọmpi nke ndị Amazon na-abanye na ebe a na-ere nri, Walmart na-enye ugbu a ịzụ ahịa n'ịntanetị ịtụkọta ma bulie, ma kwupụta ọkwa a mmekorita ya na Google na mbido Septemba iji tinye aka na ahịa Amazon. Na Mee, Walmart mara ọkwa mmụba 63% na ire ere e-commerce kwa ọnwa.
Omume bụ isi na-ere ahịa ugbu a - na nke na-eweta ezigbo nsonaazụ - bụ keonwe. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eji ihe eji eme ihe, ụfọdụ ejirila ọtụtụ afọ. Nnyocha na-egosi nhazi onwe nwere mmetụta siri ike. N'ezie, a na-adịbeghị anya ọmụmụ site na Infosys chọpụtara na 86% nke ndị na-azụ ahịa kwuru na #nhazi onwe ya nwere opekata mpe mmetụta na mkpebi ịzụta, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ahịa chọrọ ịhazi onwe ha na ahụmịhe ịzụ ahịa ha.
Ọrụ ọhụrụ na ngwa ọdịnala na-eme ka ịzụ ahịa ahaziri iche na ịzụ ihe na-agbanwe agbanwe. Enwere Nordstrom's Trunk Club, otu n'ime ọtụtụ ọrụ ọhụụ na-adabere n'ụdị ndenye aha ma jiri ndị stylists họpụta uwe dabere na mmasị ndị ahịa, wee zigara ndị ahịa otu nhọrọ nke uwe edozi. Ndị ọzọ gụnyere StitchFix, MM.LaFleur na Fabletics. Enwekwara ngwa dịka Hunt. Site na ikenye foto nke ihe ichoro, tinyere ihe a choro dika mmefu ego na nha, netwọkụ ndi Hunt na-atụ aro ngwaahịa. Nọgidenụ, ngwa ọzọ, na-enye ụgbọ ibu azụmahịa zuru ụwa ọnụ a na-akpọ Keep One Cart ka ndị ahịa nwee ike ịzụta ngwaahịa ọ bụla na ụlọ ahịa ọ bụla, ebe ọ bụla, n'otu ahụmịhe ọpụpụ enweghị ntụpọ. Ọrụ na ngwa ndị a niile na-agwa ndị ahịa agụụ maka ahụmịhe ịzụ ahịa ahaziri iche, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịgba mbọ hụ na ha na-ebugharị iji mezuo ọchịchọ ahụ.
Ihe ọ bụla iji tụọ ya
Iji nwee ike ịsọ mpi na mkpọsa ahịa ugbu a na-agbanwe agbanwe, ụlọ ọrụ agaghị ama naanị ma ghọta ndị ahịa ha kamakwa jiri nlezianya tụọ ọwa niile nke mkpọsa ahịa na azụmaahịa ha iji melite ahịa, nkesa na ego ha ga enweta.
N’ezie, ihe ka ọtụtụ ná ndị na-azụ ahịa na-alụso mgbasa ozi ọgụ. Ha na-achọ ụzọ isi zere ya ma mezie ya, yabụ ndị na-ere ahịa ga-emezigharị ma kee ihe iji nye ndị ahịa ozi nkeonwe ha na-achọ. Mgbakwunye mgbasa ozi kachasị mma taa na-agbaso ihe niile emetụ na mmekọrịta nke ndị ahịa iji kwado mmekọrịta nke onwe na ndị ahịa.
Ọbụghị naanị na ndị ahịa chọrọ ahụmịhe ndị ahịa nke onwe ha, ha chọkwara ahụmịhe ụlọ ahịa na-agbanwe agbanwe gafee dijitalụ na brik na ngwa agha. Na ahụmịhe na-agbanwe agbanwe, dịka ọmụmaatụ, ndị na-ere ahịa dị njikere nke ọma showrooming na webrooming.
Iji nyefee ahụmịhe nke ahaziri iche na nke na-agbanwe agbanwe na omnichannel, ịkwesịrị ịghọta ndị ahịa gị. Zọ kachasị mma iji mee nke ahụ bụ ịtụle data ndị ahịa. N'ezie, maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa, ịmịkọta ọtụtụ data anakọtara site na usoro ire ere na ọwa ntanetị nwere ike ịba ụba. Ọbụna ihe ịma aka ka ukwuu bụ ijikọta data ndị ahịa n'ofe ọwa dị iche iche maka foto zuru ezu, karịsịa ebe ọ bụ na ọtụtụ òtù ka na-arụ ọrụ ọwa ha na silos.
Otu ụzọ isi merie ihe ịma aka ndị a bụ ịrụ ọrụ na onye òtù ọlụlụ nke nwere nka sitere na data na nchịkọta yana onye kwadebere iji ghọta ozi dị oke mkpa ma ghọtakwuo akụkọ ahụ data na-agwa. Okwu ndụmọdụ ole na ole mgbe ị na - ahọrọ onye gị na ya ga - arụkọ ọrụ: chọọ ụlọ ọrụ na - etinye ego na iji nyocha siri ike, yana soro data sitere n'ọtụtụ ebe iji mee ka njikọ doro anya dị na ROI.
Site n'inweta data na ịzụrụ ahịa zuru oke nke onye ahịa gị, ị ga-enwe ike ijide n'aka na akara ngosi ọ bụla bụ akụkụ nke njikọta na ahaziri omnichannel ịzụ ahịa na-abịa Black Friday na Cyber ​​Monday. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ na-azụ ahịa maka onyinye ezumike ahụ zuru oke n'otu ụlọ ahịa dị na nnukwu ụlọ ahịa ahụ, na-esi na katalọgụ ahụ batara na leta ahụ, ma ọ bụ na-agagharị na ngwaahịa na ekwentị mkpanaaka. Ihe dị mkpa bụ ịzụta.
Tags: amazon elunwa ogecyber mondayonye na -emepụta iheomnichannelkeonweprime wodrobuWalmart